Chelsea oo ganaax kala kulantay Xiriirka FA Ingariiska kadib dhacdadii Kulanka Liverpool | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Chelsea oo ganaax kala kulantay Xiriirka FA Ingariiska kadib dhacdadii Kulanka Liverpool
Chelsea oo ganaax kala kulantay Xiriirka FA Ingariiska kadib dhacdadii Kulanka Liverpool
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ayaa ganaax kusoo rogay kooxda Chelsea kaddib qalalaasihii ay ciyaartoydeedu sameeyeen kulankii Liverpool ay Sabtidii barbarraha 1-1 ah la galeen kaddib kaadhkii casaa ee la siiyey Reece James.
FA-ga Ingiriiska ayaa waxa uu ku ganaaxay Chelsea falcelinta ay sameeyeen ciyaaryahannadeeda markii uu garsooruhu kaadhka cas u taagay Reece James qaybtii hore kaddib markii uu gacan ku qabtay kubbad sii dhalanaysay. VAR oo looga soo daawaday ayaa uu garsooruhu ku go’aan qaatay waxaanu u taagay kaadh cas oo toos ah.
Kooxda martida ahayd ayaa garsoore Anthony Taylor ku gadooday markii uu kaadhka bixiyey iyo waqtigii nasashada intaba, waxaana uu kaadh digniin ah ku aamusiiyey goolhaye Mendy halka ay ciyaartoyda kooxdu isku xeereen garsooraha.
Xidhiidhka FA-ga ayaa ku eedeeyey Chelsea in ciyaartoydeedu ka gudbeen xuduudka isla markaana lagu ganaaxayo ficilka ay sameeyeen iyagoo loo cuskanayo qodobka E20.1.
War-saxaafadeedka FA ayaa lagu yidhi: “Chelsea waxa lagu ganaaxay inay laba jeer jabiyeen sharciga FA qodobka E20.1 intii ay socotay ciyaaartii Sabtidii ee Liverpool ee 28/08/2021. Waxa l;agu eedeeyey Chelsea inay ku guul-darraysatay in ciyaartoydeedu u dhaqmaan si habboon daqiiqaddii 48aad ee qaybta hore iyo waqtigii nasashada markii la yeedhiyey siidhiga.
“Chelsea waxay haysataa illaa Jimcaha [03.09.21] in ay kaga soo jawaabto ganaaxa.”
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriisku ma sheegin nooca uu yahay ganaaxa uu dhigayo qodobka FA E20.1 ee ay ciyaaryahannadeedu jabiyeen, laakiin waxa la ogaan doonaa illaa Jimcaha marka ay Blues bixiso jawaabta laga doonayo.
Previous articleDaawo: Odayaasha beelaha Muqdisho oo ka horyimid go’aan kasoo baxay DF
Next articleRASMI: Xhaka oo laga helay Xanuunka Covid-19